Caasimada jasiirada Solomon ayaa saaran bandow kadib rabshado rabshado wata
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Solomon Islands » Caasimada jasiirada Solomon ayaa saaran bandow kadib rabshado rabshado wata
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Solomon Islands • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Booliska Honiara ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dibad baxayaasha oo dab qabadsiiyay dhismayaal qaarkoodna gubay saldhig boolis oo ku dhow xarunta baarlamaanka.
Maamulka dowladda Solomon Islands ayaa ku dhawaaqay in magaalada caasimadda ah ee Honiara ay hadda bandow ku jirto.
Caasimada jasiirada Baasifiga ayaa la geliyey shaqo joojin kadib markii rabshado rabshado wata ay isku dayeen in ay xoog ku galaan dhismaha baarlamaanka qaranka.
Sida laga soo xigtay Jasiiradda Solomons Afhayeenka Booliska,Booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dadkii rabshadaha dhigayay oo dab qabadsiiyay dhismayaal qaarkoodna gubay saldhig boolis oo ku dhow xarunta baarlamaanka maanta.
“Dad aad u badan ayaa isugu soo baxay baarlamaanka hortiisa. Waxay damceen inay ra'iisul wasaaraha ka dhigaan inuu iscasilo - taasi waa ra'yiga dadweynaha - laakiin weli waxaan wadnaa baaritaanno ku saabsan sababaha. Muhiimadu waa booliisku hadda xaaladda ayaa gacanta ku haya, mana jirto cid waddooyinka taagan,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska Honiara.
Sida uu sheegay sarkaalku, booliisku kama warqabin wax dhaawac ah xilligan.
Adeegga la-talinta ee Smart Traveler ee Canberra ayaa uga digay muwaadiniinta Australiyaanka ah ee ku sugan caasimadda Solomons inay taxaddaraan.
“Xaaladdu waa ay ka soo baxaysaa Honiara oo leh kacdoon shacab. Fadlan jimicsi samee, joog meesha aad joogto haddii ay nabdoon tahay in sidaas la sameeyo oo iska ilaali dadka isku dhafka ah,” ayaa lagu yidhi.
Rabshadahan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku lug lahaayeen koox mudaaharaadayaal ah oo todobaadkan u socdaalay Honiara iyaga oo ka yimid jasiirada deriska la ah ee Malaita.